Filtrer les éléments par date : jeudi, 21 janvier 2021
jeudi, 21 janvier 2021 21:39
Sady milahatra amin'ny roa maraina no mandoa lafo
Mitanila tanteraka ny vidin-drano jifain'ny mponina amidin'ny Jirama.
Ny any an-tokantrano manana robinet ao Antananarivo, mandoa 415ariary ny 1 000litatra (1m3) (Bidon jaune 50 isa), ireo milaha-drano amin'ny pompy anefa dia mandoa 500ar ny iray bidon, mbola tsy anatiny ny saran'ny mpitaona.
Ny any amin'ny faritany moa dia mandoa vidin-jiro indroa na in'efatra avo heny amin'ny ao Antananarivo mihitsy.
Ka rehefa nosakanana ihany ny fampiakarana ny vidin-jiro sy rano dia ampiaro ilay politika fampitoviana ny aloan'ny rehetra fa dia miangatra loatra raha ny milaha-drano sy ny any amin'ny Faritany hatrany no mandoa lafo, fa ireo misonanika manokatra robinet isak'izay mahatsiahy no miadana mandoa mora.
Tafandria mandry ianareo izay tsy afaka nisasa.
jeudi, 21 janvier 2021 20:51
Antsahampano-Antsiranana II : Lehilahy iray hita faty roa andro taorian’ny nipaohan’ny rano azy niaraka tamin’ny fiara
Lehilahy iray, 27 taona, no hita faty androany maraina tao amin’ny seranan’ny orinasa iray mpamokatra sira ao Antsahampano, Antsiranana II.
Iray tamin’ireo olona roa tao anaty fiara 4x4, nopaohin’ny ranontrambo ny marain’ny talata 19 janoary 2021 teo izy io, teo amin’ny renirano Antomboka Namakia, raha avy any Antsiranana hiazo an’Andranovondronana nandritra ny fandalovan'ny andro ratsy Eloise.
Efa nalain’ny fianakaviany ny faty taorian’ny fanamarinana sy ny fizahana nataon’ny dokotera teo anatrehan’ny Zandary.
Efa hita ary nakarina avy ao anaty rano ihany koa ny fiara nitondra azy ireo.
Mbola misy ramatoa iray tao anatin’io fiara io, karohina amin’izao fotoana izao. Mifarimbona amin’izany ny andary, Miaramila ary ny Fokonolona.
jeudi, 21 janvier 2021 18:54
Toliara : Tonga manoloana ny Lapan' ny fitsarana ireo vahoaka avy ao Betsinjaka
Androany 21 janoary tokony tamin'ny 09ora sy sasany maraina dia tonga manoloana ny Lapan'ny fitsarana teto Toliara ireo vahoaka avy ao Betsinjaka, Distrika Toliara II.
Olona eo amin'ny 200 eo no nitondra sorabaventy mitaky ny amoahana ny filohan'ny Filan-kevitra monisipaly ao amin'ny Kaominy Betsinjaka, izay nigadra rehefa notorian'ny Ben'ny Tanàna ho nivarotra ny tanin'ny Kaominina taman'olon-kafa.
Nidina teny an-toerana avy hatrany ny zandary nifampiresaka tamin'ireo vahoaka nivory, ary noferana mafy tsy hibahana ny arabe. Nanaiky ireo ary nipetraka eny amin'ny sisin-dalana.
Nilamina teo amin'ny tribonaly.
jeudi, 21 janvier 2021 17:00
Eloise : Tafaverina ny jiro Ambatoboeny
Maty tanteraka ny jiro teto Ambatoboeny omaly satria nilavoan'ny hazo ny fil ny jirama vokatry ny fandalovan'ny rivotra sy orambe nentin'i Eloise ny alarobia 20 janoary .
Tsy nitazam-potsiny anefa ny miaramila avy ao amin'ny ZRPS DELTA Ambatoboeny, tarihin'ny Colonel Christian Jean Randrianantenaina, fa avy hatrany dia nanapaka an'ireo hazo nanindry ny fil ny Jirama mba ahafahan'ny Jirama mamerina ny jiro.
Maromaro ireo trano simba, mbola mandrahona ny andro fa efa tsy misy rivotra sy orana firy intsony.
Efa niverina kosa ankehitriny ny jiro eto Ambatoboeny.
Avant de quitter la capitale de la Région Anosy, le Président de la République Andry Rajoelina a procédé ce 20 janvier 2021, au lancement du hotspot WI-FI situé sur la place de l’Hôtel de Ville de Tolagnaro.
Une cinquantaine de ces hotspots WI-FI ont été installés à travers Madagascar pour offrir un accès gratuit à internet pour les utilisateurs. A l'ère du numérique et du développement des télécommunications, la mise en place de ces hotspots WI-FI, offrira à la population, et surtout aux jeunes, un accès aux savoirs dont ils ont besoin grâce à internet, mais surtout un moyen de communiquer avec le monde.
Par ailleurs, il s’agit ici de la concrétisation d'un Velirano du Président Andry Rajoelina à la population, notamment en ce qui concerne l’accès à une éducation décente pour tous, ainsi que la modernisation de Madagascar à travers les nouvelles technologies et le numérique.
Le Chef de l’État s’est ensuite rendu à la congrégation des Sœurs Filles de la Charité - Sahan’i Maria qui accueille les personnes victimes de malnutrition. Le Président Andry Rajoelina a offert aux sœurs de la congrégation, des vivres afin de les soutenir dans leurs actions en faveur des familles démunies du Sud.
jeudi, 21 janvier 2021 09:15
Etats-Unis : Vita fianianana i Joe Biden
Ny alarobia 20 janoary nanomboka tamin'ny mitatao vovonana, ora tany an-toerana, no nandray ny fahefana amin'ny maha filoham-pirenena amerikanina Joseph Robinette Biden Jr., fantatra amin'ny anarana hoe Joe Biden.
jeudi, 21 janvier 2021 08:37
Jirama : Nanome 48ora ny fitondrana ampidinana ny vidin'ny jiro sy rano
Tapaka tamin'ny filankevitry ny minisitra omaly alarobia 20 janoary 2021 fa tsy tokony mbola ampiharin'ny Jirama ilay fikajiana vaovao izay mampiakatra ny vidin'ny jiro sy rano, nefa ny vidim-piainana miakatra, ary vao avy nisedra ny olan'ny valanaretina Covid-19 ny Malagasy.
Manamafy ny fitondrana fa mahazo fanampiana na subvention anarivo tapitrisa ariary ny Jirama ka ilaina ny fampidinan'ny orinasa Jirama ny saran'ny jiro sy rano izay mahakasika ny fiainam-bahoaka.
Manome 48ora ny Jirama ny fitondrana handaminana ireo faktiora izay tsy takatry ny mpanjifa intsony ny fandoavana azy.
Manamafy ity filankevitry ny minisitra ity fa mila maka ny hevitry ny ministera mpiahy sy ny governemanta manontolo ny Jirama alohan'ny ampiakatra ny vidin'ny jiro sy rano.